Eo am-pitendrena i Torkia…. Fitsarana iray iankinan’ny hoavin’ny fahalalaham-pitenenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2019 3:59 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny 24 desambra 2005)
Raha maro ny Tiorka tsy mankalaza krismasy, maro indrindra fa ireo mpianatry ny oniversite no manararaotra ny fialan-tsasatry ny ririnina hitodi-doha hody ka handany ny andro miaraka amin'ny fianakaviany. Henika ranomandry i Istanbul ary mahita sary an-tsaina aho fa olona maro no miala voly sy mamory ny eritreriny momba ny herintaona lasa. Maniry aho ny hanana fotoana bebe kokoa ao anatin'ny herinandroko satria tiako ny ho afa-mandika bilaogy bebe kokoa hovakianao. Ampahany kely dia kely amin'ny bilaogy tiorka ihany no voasoratra amin'ny teny anglisy, ary izay no ho fanapahan-kevitro ho amin'ny herintaona.
Ny tsikaritro ho mahaliana indrindra tamin'ity herinandro ity dia ny lahatsoratra iray avy amin'ny bilaogera iray fanarako, Turkish Torque, izay manana lahatsoratra momba ireo mpanao sokitra voatavo ao Akhisar ahitana sary maro amin'izany.
Tamin'ny herinandro aho nanoratra ny fitsarana an'i Orhan Pamuk, ary nanaraka izany lahatsoratra izany aho no nanaraka adihevitra mafana momba ny toe-draharahan'ny Tiorka sy ny Armeniana. Mbola nitohy ny adihevitra tamin'ity herinandro ity. Amerikan Turk (izay adinoko ny tatitra momba azy tamin'ny herinandro-azafady ry agabeyim) nanoratra ny marina momba ity raharaha ity, ary i Erkan's Field Diary manana torohay bebe kokoa momba ny fitsarana, ary tafiditra amin'izany ny resaka fiarovana izay tsy maintsy natrehin'ny mpanoratra. Hanandanja be tokoa ny vokatr'ity fitsarana ity satria miankina aminy ny hoavin'ny fahalalaham-pitenenana ao Torkia.
Koa satria moa tsy dia tsaratsara aho androany dia tsy hanoratra tsanganana lavalava araka ny mahazatra ahy (mihaavo hatrany ilay dongon-damba kely eto akaikin'ny laptop-ko), saingy aleoko mandao anareo amin'ny vatomamy vitsivitsy ihany. Metroblogging Istanbul manoratra ny fanadiovana azon'i Istiklal Caddesi (lalan'ny fahaleovantena), ilay lalana mifandray amin'ny kianja Taksim sy ireo tranombarotra lehibe miravaka jiro ao Istanbul. Iray amin'ny toerana tiako indrindra ao Istanbul izany ary toerana mahafinaritra ialana amin'ny mpizahatany maro dia maro. The White Path manana lahatsoratra momba ny fahatsiarovana an'i Abdul Hamid II, Kalifa iray pro-Amerikana. Ary ilay Mavi Boncuk tsy misy azo ampitahaina aminy amin'ny hamaroan'ny torohay ananany momba ny tantara Ottoman sy Tiorka.
Amin'ny taobaovao indray o!